इमेज साप्ताहिक : 2022-06-19
विदुर । बाग्मती प्रदेश अन्र्तगत रसुवा, नुवाकोट र धादिङका तिसवटै पालिकहरूमा बुद्धिजीवीहरूको अभियान बढाईने भएको छ । नेपाल बुद्धिजीवी संगठनमा आवद्ध बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बुद्धिजीवीहरूको बिस्तारीत बैठकलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै सो संगठनका केन्द्रीय सहसंयोजक निलकण्ठ तिवारीले बौद्धिक हस्तक्षेपका लागि संगठन अभियान जरुरी भएको बताएका छन् ।
नेपालको राष्ट्रियता बलियो पार्न, स्वाधिनता र सार्वभौमिकता अक्षुण राख्न तथा आमुल परिवर्तनकारी जनसमुदायको चाहनालाई सम्बोधन गर्न माओवादी शक्ति बलियो पार्नुको बिकल्प नरहेकाले माओवादीहरूको बृहत एकताको बातावरण तयार पार्न, समाजवादका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लगायतका बहुआयामिक आधार तयार गर्न स्थानीय तहसम्मै संगठन निर्माण जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
उनले बुद्धिजीवी संगठनलाई केवल संगठनको औपचारिकतामा सिमित नराखी आन्दोलन, पार्टी र राष्ट्रलाई नै रचनात्मक योगदान दिँदै संगठनको सार्थकता पुष्टि गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । बुद्धिजीवी संगठनको आन्तरिक प्रणाली तथा संगठनको निर्माण र परिचालनमा समेत कार्यखाका बनाएको बताए ।
संगठनका कार्यालय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेश ईन्चार्ज भीमसेन गौतमले राजनैतिक, बैचारिक र अनुशासनका बिषयमा प्रशिक्षण समेत दिएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र बाग्मती प्रदेश सचिवालय सदस्य तथा नुवाकोट संयोजक पुष्प लामिछाने ‘अरुण’ ले राजनैतिक बैचारिक कामसाथै पार्टी सुदृढ पार्न पनि बुद्धिजीवीहरूको भूमिका बढाउनुपर्ने बताएका छन् । संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्र बाग्मती प्रदेश स्कुल बिभागका सचिव जयराम आचार्यले समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय परीस्थितीको चर्चा गर्दै घरेलु नीतिका बारेमा बौद्धिक भुमिका थप्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. गणेश धमलाले संगठन निर्माणका साथै बौद्धिक स्तरीयता सम्बन्धमा धारणा राखेका छन् ।
नुवाकोटको विदुरमा आयोजित बैठकको अध्यक्षता गरेका संगठनका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कोपीलाले प्रतिवेदनहरूको तथ्य उतार र बिश्लेषण गरिने प्रतिबद्धता सहित संगठनको कार्ययोजना बनाए ।
बैठकमा धादिङ संयोजक रामकुमार श्रेष्ठ, रसुवाका संयोजक प्रकाश नेपाल, हरी देवकोटा, सुवास बिक, मीनकुमार केसी, हरीबहादुर थापा, ज्ञानु धरेल बुर्लाकोटी, बिष्णु बोहोरा, होमनाथ कोईराला, ओमनाथ तिमिल्सिना लगायतले पालिकाहरूको चुनावी रिर्पोट र संगठनको भूमिका सम्बन्धमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश उपाध्यक्ष बशुराम रिजालका अनुसार बाग्मतीका १३ जिल्ला र ११९ पालिका मध्ये ११ जिल्लाका ४ क्लष्टर अन्तर्गत १०२ पालिकाको सांगठनिक स्थिती र स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ ।
बैठकमा पार्टी र संगठनबीचको समन्वय चुस्त हुनुपर्ने, सामाजिक मुद्दाहरूमा अध्ययन अन्वेषण हुनुपर्ने तथा निर्वाचनमा भएको ‘भोट फिक्सिंग’लाई गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने, उम्मेदवार तय गर्दा मापदण्ड निश्चित हुनुपर्ने, निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि अनिवार्य कदम चाल्नुपर्ने, बैचारिक राजनैतिक काममा जोड दिनुपर्ने लगायतका बिषय महत्वका साथ उठेका थिए ।
बैठकले नुवाकोटको संयोजकमा मिनकुमार केसीलाई चयन गरेको छ । निबर्तमान संयोजक बाग्मती प्रदेश बुद्धिजीबी संगठनको उपाध्यक्षमा चयन भएकाले नुवाकोटको संयोजनकमा केसीलाई चयन गरेको हो । यस्तै, बैठकले तीन जिल्लाका तिसवटै पालिकामा संगठन अभियान तिव्र पारीने निर्णय भएको छ । गौतमका अनुसार बिभिन्न पेशागत क्षेत्रमा रहेका बिचारले उत्कृष्ट प्रतिभाहरूलाई सो संगठनमा आबद्ध गरिदै आएको छ ।
धेरै समयदेखि एउटा दृढ चाहनाले कुत्कुत्याइरहेको थियो । हाम्रा घरतिरका मानिसहरू पहिला–पहिला मालिकास्थान जाने भन्थे । खासमा त्यहाँ मालिकास्थान होइन महादेवस्थान छ भन्ने कुरा मैले पछि मात्रै थाहा पाएको हुँ ।
सानै उमेरदेखि त्यहाँको बारेमा सुनेको र त्यहाँ बाग छ भन्ने कुराले निकै डरलाग्दो बिम्ब दिमागमा बसेको थियो । त्यो बाटो हिँड्दा बाघ देखेको अनुभव सुनाउँदा एक प्रकारको डर दिमागमा बसेको थियो । पछि बिस्तारै त्यो डर हराउँदै गयो । त्यसपछि त्यहाँ पुग्ने उत्कण्ठा अरु तीव्र भएर आउन थाल्यो ।
नुवाकोटकै पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने त्यो स्थान मेरो घरबाट त्यति टाढा त होइन तर नजिकको तीर्थ हेला भनेझैँ टाढा–टाढा घुम्न जाने म आफ्नै घरको धुरीमा रहेको चिम्टेश्वर भने अहिलेसम्म पुग्न सकेको थिइनँ । यस पटक मेसो मिल्यो । स्थानीय चुनावमा उठेको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न भन्दै व्यक्तिगत बिदा लिएर घर गएको थिएँ । एक हप्ताको गाउँ घुमाइपछि मतदानको दिन आयो । उत्साहपूर्वक मतदान भयो र हाम्रो काम पनि सकियो । जित्ने हार्ने तपसिलको कुरा रह्यो । म फुर्सदिलो भएँ । ३१ गते मेरो ४१औँ जन्मोत्सव थियो । बिहानै उठेर नहाइधुवाइ गरेर बसेको थिएँ । जन्मोत्सवमा केक काट्ने संस्कारलाई मैले कहिल्यै आत्मसात् गरिनँ, बरु कुलपुरोहितलाई बोलाएर अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गराउने गर्थेँ । यसपालि कुलपुरोहित बर्खीमा भएकाले त्यो पनि गरिनँ ।
घुम्न जानलाई गर्मीको डर थियो । देवीघाट पुगेर आउनुपर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ । त्यही बेला प्रकाश नेपाल आइपुगे । उनी यसै महिनाको अन्त्यतिर स्नातकोत्तर पढ्न जापान जाँदै छन् । प्रकाश आएपछि एकाएक चिम्टेश्वर जाने कार्यक्रम बन्यो । हामी खाना खाएर जाने भयौँ । खाना पाकेकै थियो । खासमा प्रकाश काफल खाने बहानाले जाने तयारी गर्दै थिए । मचाहिँ चिम्टेश्वर जाने लामो उत्सुकताले उद्वेलित बनेको थिएँ । खाना खाएर पाँचखलेमा निस्कँदा ९ बजेको थियो । गल्छी–देवीघाट खण्डको बालुवाखानीबाट दुई लेनको पक्की बाटो पाँचखले हुँदै बेलकोटगढी नगरपालिकाको कार्यालय भएको बाघखोरसम्म पुगेको छ । बीचमा अलिकति पिच गर्न बाँकी छ ।
हामी त्यही बाघखोर जाने बाटो उकालो लाग्यौँ । केउरेनीसम्म पिच भएकाले सजिलै गयौँ त्यसपछि कच्ची बाटो हिँड्दाको राम्रा÷नराम्रा पक्षलाई आत्मसात् गर्दै हामी पौने घण्टामा बाघखोर पुग्यौँ । समय त्यति धेरै लाग्ने त होइन, हर्रे पुगेपछि हामी चढेको मोटरसाइकलले धोका दिन खोजेको जस्तो ग–यो । तर जसोतसो उक्लियौँ । क्लजतार खुकुलो भएको रहेछ । बाघखोरमा पुगेर त्यो बनायौँ । त्यसपछि भने कुनै समस्या आएन । सिउरेनीको पल्लोछेउ पुगेपछि हामी चिम्टेश्वरतिर उकालो लाग्यौँ । दुई घुम्ती उक्लिएपछि प्रकाश एकाएक खुसी हुँदै कराए । उनले बोटभरि कालै भएर पाकेको काफल देखेका थिए । मोटरसाइकल रोकेर काफल खायौँ र हेर्यौँ जताततै काफल पाकेको थियो । जङ्गलमा अधिकांश बोट काफलका थिए र सबैमा राताम्मे र कालाम्मे भएर काफल पाकिरहेको देखिरहेका थियौँ ।
फर्किँदा खाने भनेर हामी माथितिर लाग्यौँ । कच्ची बाटो एक÷दुई दिनअघि आएको वर्षाले कतै–कतै खोतलेकाले मोटरसाइकलमा जान अलि गह्रो भइरहेको थियो तै पनि हामी कतै हिँडेर कतै चढेर चिम्टेश्वर क्षेत्रमा पुग्यौँ । त्यहाँ पुग्दा लाग्यो म सानो स्वर्गमा आइपुगेको छु । सम्म परेको घाँसे मैदान, स–साना थुम्का अनि सल्लाका रुख र अन्य झाडीले पनि त्यसको सुन्दरतालाई झल्काइरहेको थियो । चिम्टेश्वरको घाँसे मैदानमा पुग्नुअघि हामीले एक जना मानिसलाई बाटोमा भेटेका थियौँ । मैले उनीसँग जङ्गली जनावरबारे जिज्ञासा राखेको थिएँ । त्यहाँ बाघ, बँदेल र दुम्सीको बिगबिगी रहेको कुरा उनैबाट थाहा पाएँ । मनमा हल्ला डर पनि लाग्यो ।
जङ्गलको बीचमा मन्दिर कहाँ छ भनेर पहिले त हामीले चालै पाउन सकेनौँ । त्यहाँ गएका एक जना जो निस्फिक्री भएर घुमिरहेका थिए । उनलाई सोध्यौँ र मन्दिर गयौँ । मन्दिरमा खास कुनै तामझाम थिएन । कंक्रिटको प्रयोग गरेर भर्खरै बनाइएको हो । बाहिरतिर असाध्यै राम्रोसँग कुँदिएका ढुङ्गाहरू देखिँदै छ जो पर्खाल लगाउन प्रयोग गरिएका छन् । मन्दिरभित्र पुरानो ढुङ्गामा शिवलिङ्गको यौनी भाग कुँदिएको छ । बीचमा लिङ्गभागचाहिँ कालो पत्थरको छ, जो कुनै बेला भाँचिएको जस्तो पनि देखिन्छ । उत्तर–पश्चिम कोणमा पत्थरको नन्दी देखिन्छ, जसको टाउको भाग फुटेको प्रस्टै देखिन्छ । नन्दी एउटा ढुङ्गामाथि छ र त्यो ढुङ्गो पनि फुटेको छ । नन्दीको आकृति हेर्दा केही पुरानोजस्तो पनि देखिन्छ । सायद गोठालाले या त्यहाँ जाने कुनै भक्तले अतिश्रद्धावश नन्दीलाई घुमाउँदा फुटेको हुनुपर्छ ।
हामीले श्रद्धासाथ शिवलिङ्गमा ढोग्यौँ । मन्दिरमा मानिसको आस्था हुन्छ । हामीले पनि आस्थालाई ढोग्यौँ । मन्दिरभित्र घुम्दै गर्दा मनमा एकाएक आयो– ‘शरीर स्वस्थ रहोस् सबैभन्दा सुख र सम्पत्ति पनि त्यही हो । म स्वस्थ रहूँ ।’ त्यहाँबाट निस्किएर मैले केहीबेर सुनसान जङ्गलमा ध्यान गरेँ । मन पवित्र भयो । लाग्यो मेरो ४१औँ जन्मोत्सव खास भएको छ । भनिन्छ पृथ्वीनारायण शाहले यस ठाउँमा गढी बनाएका थिए । सायद नुवाकोट र बेलकोटगढी आक्रमण गर्न तथा काठमाडौं उपत्यका हेर्न त्यो स्थान उपयुक्त ठानेका थिए । उनले त्यहाँ चिम्टेश्वर महादेवको आराधना गरेको किंवदन्ती पनि रहेको छ । चिम्टेश्वर महादेवको आफ्नै प्रकारको कथा पनि त्यहाँ सुनिन्छ । समुद्र मन्थनबाट निस्किएको विष खाएपछि महादेव उत्तरापन्थ लागेका र त्यो स्थानमा आइपुगेर चिम्टा छोडेका कारण त्यहाँ चिम्टेश्वर महादेव पुजिन थालेको कहानी त्यस स्थानसँग जोड्ने गरिएको छ । मन्दिरमा पूजा एक जना माताले गर्दै आएकी छिन् । हामीले उनको आफ्नै गुनासो सुन्यौँ ।
मन्दिरभन्दा माथिल्लो थुम्कोमा विकासको भद्दा रूप ‘भ्यु टावर’ बन्दै छ । परिवारसहित रात बिताउन मिल्ने स्तरीय होटल, स्थानीय उत्पादन र सेवा अनि सांस्कृतिक विशिष्टताको अभावमा ‘भ्यु टावर’ विकासको नाममा मजाक मात्रै हो भन्ने लाग्यो । त्यो डाँडो आफैँमा ‘भ्यु टावर’ हो । त्यहाँबाट लाङटाङ, गणेश, जुगल, दोर्जेलाक्पालगायत आधा दर्जन हिमश्रृङ्खलाका अतिरिक्त काठमाडौं उपत्यका, मकवानपुर, चितवन, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, दोलखा, रामेछाप, धादिङ जिल्लाको केही भाग देख्न सकिन्छ ।
त्यहाँबाट तिब्बतको केरुङ पनि देख्न सकिन्छ भन्ने सुन्यौँ तर तुवाँलोले गर्दा देख्न सकिएन । वर्षको एक पटक हिउँ पर्ने गरेको कुरा सल्लाका फेदमा लागेका लेउले मौन भाषामै भनिरहेका थिए । हामी निर्माणाधीन टावरको माथिसम्म गयौँ र हेर्यौँ । बाटामा थुप्रै लालीगुराँसका बोटहरू देखिरहेका थियौँ । त्यो देखेर लाग्यो–यो ठाउँ पक्कै २००० मिटर माथि छ ।
टावरबाट ओर्लिएर सम्म परेको घाँसे मैदान घुम्यौँ । जताततै बियरका बोतल फुटाएर फ्याँकिएको थियो । खुट्टामा बिझ्नुभन्दा पहिला मनमा बिझ्यो । माल पाएर चाल नपाएपछि के लाग्छ ! जुन स्थानले त्यहाँको स्थानीय जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ त्यो स्थानलाई त्यति कुरूप बनाएको त्यहीँका मानिस टुलुटुलु हेरेर कसरी बस्न सकेका होलान् ! लाखौँ मानिसको मनलाई आनन्द दिनसक्ने त्यो स्थानलाई केही मानिसले नरक बनाइरहेका छन् । संरक्षण गर्ने निकाय र मानिसको अभावमा पनि त्यो मनलाग्दीले त्यो क्षेत्रलाई निकै जोखिम बनाएको महसुस गरेँ । फुटेका सिसा मानिसको खुट्टामा बिझे के गर्ने होला?
२०७० वैशाखमा नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायीको आयोजनामा रानीपौवादेखि चिम्टेश्वर हुँदै देवीघाटसम्मको पैदलयात्रा गरेपछि यो क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले चर्चामा आउन थाल्यो । त्यस बेलासम्म त्यो स्थान धार्मिक हिसाबले वरपरका मानिसको आस्थाको केन्द्र बनेको थियो । २०७० पछि आन्तरिक पर्यटक जान थाले तर बियरका कार्ट‘न बोकेर । खाए, रमाइलो गरे र त्यही फुटाएर हिँडे । आज त्यो क्षेत्र हिँडिनसक्नु भएको छ । बेलकोटगढी नगरपालिकाले भर्खर–भर्खरै मोटरबाटो त्यहाँसम्म पु-याएको छ । काठमाडौंबाट रानीपौवा हुँदै ३५ किलोबाट पनि त्यहाँ पुग्न सकिन्छ । बेल्कोटको धमलेबाट बाघखोर निस्किएर पनि जान सकिन्छ । कोल्पुटारबाट सिधै उक्लिएर दुईपीपल हुँदै पनि जान सकिन्छ । यता कुमरीतिरको बाटो पनि त्यहाँ जोडिएको छ। माथि धेरै वातावरण दुषित नहोस् भनेर सिँढी पनि निर्माण गरिएको छ । हामी भने सिँढी नचढेर मोटरबाटोबाट गएका थियौँ । त्यहाँको पर्यटन विकासका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पनि काम गरिरहेको छ । काठमाडौंबाट नजिक रहेको त्यति सुन्दर स्थान चिनाउनै नसकेर पछि प–यो भन्ने लागिरह्यो । ध्यान ग-यौँ । सुसेल्यौँ । नाच्यौँ । फोटो खिच्यौँ । घुम्यौँ । समग्रमा आनन्द लियौँ । निकैबेरको घुमाइपछि हामी तलतिर झर्यौँ ।
आउँदा सुनसान भएको जङ्गल मानिसको कोलाहलले भरिएको थियो । बाघखोरमा चुनावी परिणाम सुन्न आएकाहरू काफल खान यता आएका थिए । जताततै काफल पाकेको थियो । प्रकाश र मैले एक डेढ घण्टा लगाएर २÷३ किलो काफल टिप्यौँ र ओरालो लाग्यौँ । बाघखोरमा मानिसको भिड थियो । हामी हर्कको पसलमा चिया खाएर ओरालो लाग्यौँ । घर पुग्दा ५ बज्नै आँटेको थियो । घर पुगेपछि लाग्यो लामो समयदेखिको एउटा धोको पूरा भएको छ ।